Tag: iphone plugin | Martech Zone
Tag: iphone plugin
Ebe ọ bụ na m na-emelite blọọgụ m ma tinye WordPress na Amazon S3, enwere m ike wepu plugins caching. Ihe mkpuchi ihe na-arụ ọrụ na-adịghị mma ma e jiri ya tụnyere ịkwanye ihe oyiyi m niile na S3. (Mygwọ ọnwa mbụ m: $ 0.50). M na-aghọta na caching nwere ike afanyekwa ụfọdụ ndị ọzọ arụmọrụ nke m na saịtị… ma ọ ga-egbochi m imelite saịtị na customizations maka iPhone, Blackberry, na ndị ọzọ na mobile ngwaọrụ. Ihe iseokwu bụ na otu onye ọbịa nwere ike
Ndị ahịa anyị na-eji PCAnywhere ebe okwu maka nkwado ha. M na-agba ọsọ Vista - yabụ mgbe m nwara ịbugo onye ahịa anyị nwere ikikere, ejiri m ozi zutere m ozi ngwa ngwa na onye nrụnye ahụ kwụsịrị. Na ịga na saịtị Symantec, ha mechara dozie nsogbu ndakọrịta na nwelite na mbipute 12.1. Agwọ ahụ? Ga-akwụ $ 100 maka nkwalite ahụ. Ekwesịrị m inwe ya, yabụ akwụrụ $ 100 ahụ. Na-akwụ $ 100 maka otu